I-Raw Arnica Montana abaphawuli be powder HPLC =98% | AASraw
/ iimveliso / IiReagents zeR & D / Arnica Montana powder
Udidi: IiReagents zeR & D
I-AASraw ihamba kunye nokukwazi ukuvelisa kwigram ukuya ku-Arnica Montana powder powder, phantsi komgaqo weCGMP kunye nolawulo lwekhwalithi ephezulu.
Arnica Montana powder inetyhefu xa igxiliwe ngamandla onke, kodwa ingasetyenziswa njengamafutha, i-gel okanye ukhilimu kwisikhumba esingenakunyaka okanye sithathwe ngaphakathi xa ihlanjululwe ngaphakathi kwe-homeopathically. U-Arnica ukhulile waba enye yezilwanyana ezithandwa kakhulu kwi-worldopathic kwihlabathi lonke ....
Arnica Montana powder ividiyo
Arnica Montana powder Abalinganiswa basisiseko
igama: Arnica Montana powder
I-Arnica Montana powder usetyenziso
Amagama aqhelekileyo ku-Arnica Montanaare Intaba yaseDaisy, i-Leopard's bane kunye neTagwa.
Umthamo we-Raw Arnica Montana powder
Akukho mali ephantsi yeArnica Montana powder okanye nayiphi na idiza ethile ephakanyisiwe; kukho iindlela ezininzi ezahlukeneyo zokusetyenziswa. Imilinganiselo efanelekileyo kufuneka kuqala ixoxwe kunye noqeqesho lwenkonzo yakho yezempilo, kwaye kufuneka uhlale ufunda iileyile yomveliso phambi kokuba uthathe nantoni na.
Arnica Montanais inetyhefu xa ithathwa ngomlomo ngaphandle kokuba ihlanjululwe kwizilwanyana ze-homeopathic ezifana ne-30X okanye i-200D.
Isilumkiso kwi-Arnica Montana powder
I-Homeopathy yinkqubo yezokwelapha esekelwe kwinto ebizwa ngokuba ngumgaqo-"onjengophiliswa-onjengawo," apho into eyenza ukuba impawu zisesimweni esisemgangathweni zisetyenziswe (kwiqondo eliphantsi kakhulu) ukunyanga iimpawu ezifanayo umntu ogulayo. Ngaloo ndlela, kwi-homeopathy, izilungiso zisebenza ngokugqithiseleyo xa zihlanjululwa kakhulu: i-200C inamandla ngaphezu kwe-6C isilinganiselwa.
IArnica Montanacan isetyenziselwa ukunciphisa ukuqina kobushushu okanye ukuhamba ngokude. Kwaye nabani na oqhaqhazelayo baya kuqonda ukukwazi u-Arnica Montana ukunciphisa ukutyumza i-discoloration.
Ukuncedisa ukufumana ukulimala kwamancinci, ukugqithisa okanye ukuhlinzwa, uArnica Montanais kufuneka ukuba zonke iikhabhinethi zeyeza. Ingaba ungumntwana okhuselekileyo womntwana, umlindi weveki okanye umdlali wezemidlalo, uyiphendule epheleleyo kuyo yonke inzakala yokuphila kancinci.
Indlela yokuthenga i-Arnica Montana powder ukusuka kwi-AASraw
I-Alchedone acetophenide (DHPA) Powder (24356-94-3)